Kuwani waa bogag dibedda ah, waxayna ku furmayaan bog cusub. Soomaalida waa dad caan ku ah xagga gabayada iyo noocyada kala duwan ee suugaanta, balse dadka qaar ayaa wax dheer kuwa kale marka laga hadlayo arrintan. Qoyska reer Saleebaan Bidde oo 10 qof ka koobnaa, balse hadda 3 uun ay ifka ka joogaan ayaa ah qoys wada maansoyahano ah, waxaana jirta in wiil iyo gabadhba ay gabayada tiriyaan.
Qoyskan waxaa ka dhashay abwaankii caanka ahaa Axmed Saleebaan Bidde ee curiyay heesaha Soomaalida intooda badan. Wariyaha BBC-da ee Hargeysa Sadiiq Burmad ayaa la fariistay Cabdullaahi Saleebaan Bidde oo qoyskan ka mid ah, laftiisana gabya, islamarkaasna ay jiraan heeso caan baxay oo uu curiyay. Waxa uu marka hore sharaxayaa qoyska reer Saleebaan "Reer Saleebaan waa la wada gabyaa, wiil iyo gabadhba waan gabaynaa, weey heesaan, inta fursad u hesho mooyaane, inta kale marka caadiga la yahay waa la gabyaa, macal aabbe waa gabyi jiray".
Kaliya ragga ma ahan kuwa maansooyinka tiriya, ee sidoo kale labada hablood ee Faadumo Saleebaan iyo Khadiijo Saleebaan waa kuwa iyaguna aftahano ah, allena ku manaystay hibada curinta iyo hal abuurnimada. Odayga laftiisa illaa abtirkiisa dhawr awoow waxa ay ahaayeen kuwa wada gabya, waxaana jira gabay uu illaa hadda xusuusto Cabdullaahi Saleebaan oo uu aabihiisa mariyay.
Waxaa la sheegay in nin ay ilmo adeero ahaayeen Saleebaan uu gabay usoo tiriyay, kaas oo ku weeydiinayo sababta uu uga guuray gobolka Bari, isaga oo u duurxulay in xaaskiisa ay ku qasabtay geediga. Gabaygii ninka ayaa waxaa ku jirtay kalmaday ahayd "Haweenka waa cadaw, haddii aan la'iska celinaynin". Saleebaan Bidde oo kalmadaas ka gilgishay, ayaa gabay jawaab ah mariyay, waxaana ka mid ahaa erayada soo socda. Waxaa ka mid ah hees uu qaaday Xassan Aadan Samatar oo miraheeda ay ka mid yihiin Qarnigii Sagaalaad, soonkuu jacaylkii, Soomaali kaga yimid, sow Seylac ma ahayn.
Wariyaha BBC-da ayaa weeydiiyay sababta uu magaalada Seylac ugu tilmaamay in ay ahayd goobtii uu jacaylka naga soo gaaray. Waxa uu ku jawaabay in Cilmi Boodhari iyo Hodan ka hor ay jireen lammaane kale oo qiso jacayl oo daran lahaa, kuwaas oo la kala oran jiray Muriyo iyo Xuseen, kuwaas oo ku dhashay magaalada Seylac. Qoys Soomaaliyeed oo ku caan baxay curinta suugaanta 28 Maarso Lahaanshaha sawirka Qoyska Image caption Cabdullaahi Saleebaan Bidde, Abwaan Soomaalida waa dad caan ku ah xagga gabayada iyo noocyada kala duwan ee suugaanta, balse dadka qaar ayaa wax dheer kuwa kale marka laga hadlayo arrintan.
Qalabkan aad haysato kuma ciyaari kartid maqalkan iyo muuqaalkan. Mowduucyada la xiriira Suugaan Soomaaliya.
Gadaal ilaa kor.
Kuwani waa bogag dibedda ah, waxayna ku furmayaan bog cusub. Soomaalida waa dad caan ku ah xagga gabayada iyo noocyada kala duwan ee suugaanta, balse dadka qaar ayaa wax dheer kuwa kale marka laga hadlayo arrintan. Qoyska reer Saleebaan Bidde oo 10 qof ka koobnaa, balse hadda 3 uun ay ifka ka joogaan ayaa ah qoys wada maansoyahano ah, waxaana jirta in wiil iyo gabadhba ay gabayada tiriyaan. Qoyskan waxaa ka dhashay abwaankii caanka ahaa Axmed Saleebaan Bidde ee curiyay heesaha Soomaalida intooda badan. Wariyaha BBC-da ee Hargeysa Sadiiq Burmad ayaa la fariistay Cabdullaahi Saleebaan Bidde oo qoyskan ka mid ah, laftiisana gabya, islamarkaasna ay jiraan heeso caan baxay oo uu curiyay. Waxa uu marka hore sharaxayaa qoyska reer Saleebaan "Reer Saleebaan waa la wada gabyaa, wiil iyo gabadhba waan gabaynaa, weey heesaan, inta fursad u hesho mooyaane, inta kale marka caadiga la yahay waa la gabyaa, macal aabbe waa gabyi jiray". Kaliya ragga ma ahan kuwa maansooyinka tiriya, ee sidoo kale labada hablood ee Faadumo Saleebaan iyo Khadiijo Saleebaan waa kuwa iyaguna aftahano ah, allena ku manaystay hibada curinta iyo hal abuurnimada.
Tan ilaa wakhti aad u horeeyay bulshada Soomaalidu waxay caan ku ahayd halabuurka gabayayada , geeraarka iyo noocyada kala duwan ee suugaanta taasi oo qeyb ka ahayd nolosha maalinle ee bulshada. Odhaahda afka iyo xikmadu waxay ahaayeen nidaam bulshadu iskugu gudbiso fariimaha, dhacdooyinka, sheekada iyo wixii la mid ah. Aduunka suugaanta daabacan, gaar ahaan maansada; Carab ayaa leh suugaanta ugu fac wayn aduunka iyada oo noocyo badan oo kala duwan ay jirto suugaanta Carbeed. Soomaalida dhulkeeda qariirad ahaan dhaca dariska qariirada Carabta, ayaa waxaa jirta in Soomaalida ay sida Carabta qiimo badan suugaantu u leedahay iyada oo dhaqanka iyo hidaha soo jireenka ah ee ab' ka soo gaadhka ah ay in badan ku dheehantahay qadarinta suugaanta.